उपप्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > उपप्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित
May 12, 2020 May 12, 2020 GRISHI206
काठमाडौं । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन खुकुलो पार्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टिमात्रै जनाएनन् सिफारिस गर्ने नेतृत्वकर्ता उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग आक्रोशित नै बने ।
केही दिनदेखि काठमाडौंका सडक नै जाम हुन थालेका दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत आफूले देखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘के लकडाउनमा गाडी जाम हुन्छ ? कस्तो लकडाउन हो यो’ भन्दै दोस्रो प्रश्न गरेका थिए ।
‘लकडाउनको बेवास्ता गर्दा अरु देशमा के के भएको छ ? तपाईंहरुलाई पनि थाहा नै होला नि । मानिसहरुको जीवनरक्षा ठुलो कुरा हो । त्यसपछि व्यापार व्यवसायको कुरा आउँछ’, ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनी अघि बढ्दै भने, ‘मानिस नै नरहे केलाई चाहियो धनसम्पत्ति र सुनँचादी ? त्यसैले यो हेलचेक्र्याई गर्ने बेला हुँदै होइन । तत्काल लकडाउन कडा बनाउने र मानिसहरुलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास हुनुपर्छ ।’
‘यो समस्या सरकार एक्लैले गरेर मात्र पनि समाधान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसैले पनि हेलचेक्र्याई गर्नुहुन्न । यसमा सरकारले जनतालाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । मानिस रहे सवै रहन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘आर्थिक गतिवधि भन्दा मानिसको जीवनलाई महत्त्वपूर्ण ठानांै यसमै सवैको हित हुन्छ ।’
लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै सडकमा जाम हुन थालेको छ भने सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका थिए । तर बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने खोल्ने नाममा लकडाउनलार्ई खेलाची नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यतिमात्रै होइन राजधानीमा अवाश्यक नपर्ने, कपडादेखि भाँडा पसलहरु समेत खुल्न थालेका थिए । तरकारी बजारहरुमा दुरी कायम नगरी मानिसहरु हेलचेक्र्याईपूर्वक हिँड्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ।
मंगलबारमात्रै नेपालमा ५७ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १९१ पुगेको छ । दिनहुँ कोरोना संक्रमित थपिने क्रम बढ्न थालेपनि सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।